MuLorraine, mubiki anotengesa ... chokoreti penises yeZuva raValentine - teles
MuLorraine, mubiki anotengesa… chokoreti penises yezuva raValentine
Biting opposition player’s penis in ‘saucy’…
NASA yakarasikirwa neiyo 11 njodzi asteroids, asi iyo AI ine…
SpaceX inobvumirana kutanga vashanyi vakabhadhara nzvimbo vashanyi mu…
Iyo Stinus bakery muNiderviller (Moselle) inopa iyo yepakutanga uye isina kujairika pfungwa yeValentine's Day: chokoreti penis! Kuvhiya kwacho bhokisi: vanozvibvarura.
Yakatumirwa pa 13 Feb 20 ku 18: 11
Mubiki kubva kuNiderviller (Moselle) anotengesa chocolate penises paZuva raValentine. (© Illustration / CD)
Iyi ndiyo pfungwa isina kujairika ye Valentine en Lorraine : unogona kupa mumwe wako a chokoreti chokoreti. Iyi khekhe yakasarudzika iri kutengeswa muStinus bakery, mukati Niderviller (Moselle), pedyo Sarrebourg.
Verenga zvakare: Kujairika. Iyo hombe yekuridza toyi yekuvhiza yakarongeka muBelgium, kunyoreswa munguva pfupi kuchavhurwa
Pfungwa kubva kune pastry chef
Brice Stinus, musoro wegadziriro, akatsanangurira Lorraine Nhau ichi chisikwa chakabvepi?
Cheki yekubheka anga achishanda nesu kubva munaNovember apfuura uye aive ave kutoita izvi mubiki rake rekare muLizzelbourg. Akandipa chinhu chepakutanga uye ini ndakabva ndangokasira. Izvo zvakafadzawo vanhu vazhinji.
Kubva kutanga kwaFebruary, mayadhi echokoreti anga achishongedza zvitambi zveStinus bakery. Kuvhiya kwacho ibudiriro chaiyo: "Nemirairo yatinayo yemazuva anouya, tinogona kukwanisa kusvika mazana matatu," anodaro Brice Stinus.
Verenga zvakare: MuMoselle, kubudirira kunoshamisa kwesoseji… nePicon yemubhangi
Kudzoka kweZuva raAmai?
Sekureva kwemubiki, machira ekokoreti aya acharamba achitengeswa "mazuva mashoma mushure meZuva raValentine" uye vanogona kudzoka "panguva yepati, senge Zuva raamai".
Idzi dzingave nhau dzakanaka kune vazhinji vatengi vakafarira dhigiri repiri rekushanda uku! Vanoda kuitora iko zvino vane musangano paRue de la Paix muNiderviller, Muvhuro kusvika Chishanu kubva 6:30 a.m. kusvika 18:30 p.m., Mugovera kubva 6:30 a.m. kusvika na15 p.m. uye Svondo kubva na7 a.m kusvika na12 p.m.
Kana gwaro racho rikasaonekwa unogona kuzviongorora pakero iyi: https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d697054.4598057233!2d6.308937788327546!3d48.93408868803662!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x479410e496188cef%3A0x662052c3864ec53!2sBoulangerie%20Stinus!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1581613243962!5m2!1sfr!2sfr
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://actu.fr/grand-est/niderviller_57505/en-lorraine-une-boulangerie-vend-penis-chocolat-la-saint-valentin_31467592.html
Alison Hammond anogovera mutero wemanzwiro sezvo amai vanofa kubva pachiropa nekenza yemapapu
Bitcoin Yakundikana Kutyora Iyo Crucial 2019 Resistance Line: Yakadzika Sei Inogona Kudonha Kubva Pano? BTC Mutengo Kuongorora & Kuongorora
Kubata kupikisa kwemutambi's penis mu 'saucy' post-mutambo kurwira anotambira…
NASA yakarasikirwa neiyo 11 ma asteroids ane njodzi, asi AI yakavabata
SpaceX inobvuma kutanga vashanyi vakabhadhara nzvimbo vashanyi muPasi mudhiri…
Nhau dzebhola: Player inoruma penis yemukwikwidzi, kurambidzwa kwemakore mashanu, Terville vs Soetrich